‘शसस्त्रद्वन्द्वका घटनाः राजनीतिक दवाव आए अनिष्ट’
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि न्याय पाउनेमा द्वन्द्व पीडितहरु शसंकित छन् । दलीय सहमति, छानबिन र पीडितले पाउने न्यायको बारेमा सुरु भएको बहसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नियाली रहेको छ तर नौ बुँदेका विषयमा आधिकारीक मुख खोलेको छैन ।
एक हप्तामा किताब पुग्छ (अडियो सहित)
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दे केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिल झाले देशका ९९ प्रतिशत बिद्यार्थीले अबको हप्ता पाठ्यपुस्तक पाउने दाबी गर्नुभयो ।
केरा नाम एक : फाइदा अनेक
तपाईं हामी सबैलाई केराको बारेमा थाहा छ, केरा खाने पनि गर्छौं । बोटबाट मल बनाउने गरिन्छ । तर त्यत्ति मात्र होइन केराको बोटबाट विभिन्न प्रकारका कपडाहरु, झोला, पर्दालगायत विभिन्न उत्पादन हुने गर्छ ।
यी सर्त पुरा गरेमात्रै वार्तामा बस्ने गठबन्धनको अडान (अडियोवार्ता)
काठमाडौं । भएका सहमति कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता सरकारले जनाए मात्रै मधेसी मोर्चा वार्तामा बस्ने भएको छ । सरकारले वार्तामा आउन मोर्चालाई फेरि मन्त्रिपरिषदबाटै लिखित आग्रह गरेको थियो ।
१० वर्ष भित्र होला नेपालबाट बोक्सी प्रथा उन्मूलन ?
काठमाडौं । बोक्सी आरोप (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७२ अहिले कार्यान्वयनमा छ । विधेयक तयार भएको झण्डै ६ वर्षपछि संसदले पारित गरेर गत साउनदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । तर समाजमा बोक्सी आरोप लगाउने क्रम कम भएको पाईंदैन
तत्काल सरकार ढाल्ने खेलमा छैनौंः एकिकृत माओवादी
केहि दिन अघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेसँग नौ बुँदे सम्झौता गरेको एमाओवादीले तत्काल सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने स्पष्ट पारेको हो ।
एक घर-एक रोजगार कहिले र कसरी ?(अडियोवार्ता)
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा केही पुराना केही लोकप्रीय कार्यक्रम राखेको छ । कामदार र कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन, बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण, ‘जनताको लगानीमा जलविद्युत’ प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार र एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गरिएको छ ।
न्याय सर्वसुलभ र विचौलियाको चंगुलबाट निकाल्न खोज्दा
न्यायालयमा विचौलिय छन भन्ने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि स्वीकार गर्नुभयो । आनो नौ महिने कार्यक्रममा न्यायका नौ सिंङ हुन्छन् भन्ने उखान फेर्छु भन्नु भएको थियो । के न्याय पाउने सम्दर्भमा बनिएको उखान फेरिए त ?
एकै मान्छे- सफल पाँच भूमिका (अडियोवार्ता)
समयको व्यवस्थापनसँगै परिवारका सदस्यहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न जान्यो भने चाहिं सहज हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल चीन सम्बन्ध: विगत, वर्तमान र भविश्य( अडियोवार्ता)
नेपाल–चीनको सम्बन्धको परम्परागत लामो भएतापनि औपचारिक रुपमा यी दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्धले ६ दर्शक नाघेको छ । सांस्कृतिक तथा धार्मिक आधारले जोडिएको नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अहिले विकास निर्माणमा साझेदारीको तहमा पुगेको छ ।